ဖူးနုသဈ: Facebook ကိုကျတဲ့ ရောဂါ
တော်ပါသေးရဲ့။အဲသလောက်တော့မဆိုးသေးဘူး။ အဲသတော့ဆရာဝန်ပြစရာမလိုပါဘူး.အင်း ဒါပေမဲ့ အဲသည် ဆရာဝန်လဲ ဖဘ စွဲမနေဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲနော့. ပြန်ခါနီးကျမှ ခင်များ ကို ကျွန်တောင် invite လုပ်လိုက်မယ်ဆိုမှခက်နေဦးမယ်။
ပြင်ပက သူငယ်ချင်းတွေ ကအတွေ့မခံကြ ဖုံးပြောရင်လက်မခံကြလို့ အင်တာနက်နဲ့မျက်နာအပ်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်မှာဆိုရင် စကားလက်ခံပြောကြတယ်။ စီပုံးမှာဆိုရင်စကားလက်ခံပြောကြတယ်။ အပြင်မှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိရဘူး ။ သိခွင့်မလဲမရှိဘူး. တွေ့ခွင့်လဲမရှိဘူး အတွေ့လဲမခံကြဘူး
အန်တီကွန်ရဲ့ ပထမ ကွန်းမန့်အတိုင်းဖြစ်နေရင် ဒုက္ခ
ကြိုက်သွားပြီ။ ရှေ့ကလူနာနှစ်ယောက်ကိုရေးထားတာလည်း ရယ်ရတယ်.. ဖဘ မှာ ၇ှဲလိုက်မယ်နော်.... ဟီးဟီး
အဖွားကြီး ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကို ကြိုက်တယ်... ပြီးတော့ ရီလိုက်ရတာ အသံတောင်ထွက်သွားတယ်...:)
Facebook သူငယျခငျြးစာရငျး ထဲကနေ ဖကျြပဈလိုကျတာပေါ့။
i also did this one. =D
စိတ်ကြည်နူး ရွှင်ပြုံးစရာလေးတွေ များများ ဘာသာပြန်ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်...
FB လူမမာတယောက် လာဖတ်ပါတယ်ကွယ်..